Miyay adkaanta Trump ee Shiinaha ku wajahan bilowga dhicitaanka doolarka iyo burburka dhaqaalaha? : Martin Vrijland
Miyay adkaanta Trump ee Shiinaha ku wajahan bilowga dhicitaanka doolarka iyo burburka dhaqaalaha?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 18 May 2020	• 11 Comments
Iyada oo siidaynta isdabajoogga ah ee heerka dahabka iyo heerka saliidda, doollarku wuxuu isu beddelay lacag la daabici doono iyadoo aan la xadidin. Waxaan ugu yeernaa lacag Fiat. Lacagta Fiat waxay u xun tahay ganacsiga caalamiga ah. Ka dib oo dhan, daabacaadda boqolaal balaayiin ayaa sababa hoos u dhac ku yimaada lacagta.
Sababta oo ah bangiga dhexe ee Mareykanka (Fed) ayaa maamusha hanaankan abuuritaanka dollar isla markaana doolarku waa heerka caadiga ah ee ganacsiga caalamiga ah, hoos u dhaca dollarka ayaa sidoo kale saameyn ku leh hoos u dhaca lacagaha kale, oo ay ku jirto lacagta euro.
Qiimaha foostada foosto oo saliida si aan caadi aheyn u kacsan (taas oo macnaheedu yahay in aad heshay lacag aad ku iibsato saliid) usbuucyadii la soo dhaafay, waa wax fiican in saliidaasi aysan aheyn kuwii caadiga ahaa. Saliida waxaa lagu beddeli doonaa Bill Gates toy cusub 'iftiinka qorraxda in hydrogen loogu sameeyo mashiinnada gubashada).
Sababta kaliya ee naloogu soo hadhay oo ah inaanay jirin wax la bixin karo oo ah heerka doolarku waa isbaheysiga militariga Mareykanka (ilaa hadda). NATO waxay ku qasabtay dal walba ama hogaamiye kasta inuu ka leexdo dollarka. Waxay had iyo jeer wax ka qabataa bambooyinka iyo bambooyinka iyo nadiifinta hogaamiyaha.
Yugoslavia 90-yadii. Si adag deyn kasta (sidaa darteed dollar madax-bannaan). Ciidan xoog leh (maaha xubin ka tirsan NATO iyo lambarka 4 marka loo eego xoogga ciidan ee adduunka). Dhimashadii Tito ka dib, dadweynaha waxay bilaabeen inay iska caabiyeen midba midka kale si ay u bilaabaan dagaal oo ay tahay in dalka lagu burburiyo, taasoo IMF u oggolaaneysa inay soo galaan lacag ay ku amaahdaan dib-u-dhiska (ku tiirsanaanta dollar).
Ciraaq, Saddam Hussein wuxuu doonayey inuu ka ganacsado saliida Euro. Markaa nadiifi.
Libya, Moammar Mohammed al-Qadhafi wuxuu rabay dahab dahab ah oo Afrikaan ay siiso si ay u siidayso ku tiirsanaanta dollar. Illaax ah oo hagaagsan
Hadda oo dagaalkii Suuriya uu muujiyey in awoodda NATO (toy American) awoodda hadda ka sii horreeyaa aysan jirin, sidaas awgeed waa bilowga dhammaadka heerka dollarka adduunka. Wadamo aad u tiro badan ayaa dhabarka u jeedinaya Mareykanka, jawaabta kaliya ee Donald Trump ayaa ah dariiqa adag: dagaallada ganacsiga. Hadana - xaaladdii coronavirus - wuxuu dib ugu dhacay sii wadida sii wadidda Shiinaha. Wareysigiisii ​​ugu dambeeyay ee lala yeesho FOX News ayuu yidhi xitaa inuu doonayo inuu xiriirka kala jaro Shiinaha.
Rikoorka, waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladda Shiinaha ay ku guuleysatay in ay dhaqaalaheeda sii haysato ama ka yar tahay doolar madax-bannaan. Doolarkaasi waxaa loo isticmaali jiray oo kaliya ganacsiga caalamiga ah, laakiin bangiga dhexe ee Shiinaha wuxuu had iyo jeer doolar ka soo iibsan jiray luqadaha kala duwan ee waddanka wuxuuna ku guuleystey inuu yuan ku xoojiyo xuduudaheeda.
Intaa waxaa u dheer, Shiinaha waxay saameyn ballaaran oo dhaqaale ku leedahay waddamo badan oo adduunka ah iyo mashruuca Shiinaha ee Belt iyo Road Initiative (BRI) wuxuu xaqiijinayaa iskaashi lala yeesho 120 waddan iyo 40 noocyo badan oo dhaqameed ah. Taasi waxay ka dhigeysaa dalalkaas iyo shirkadahaas inay si aad ah ugu tiirsan yihiin Shiinaha.
Marka Donald Trump uu ku dhawaaqo inuu doonayo inuu gebi ahaanba ka tuuro Shiinaha, waxay aad ugu egtahay ficilkii ugu dambeeyay ee quus ka imaada awood weyn oo lumisa gacantiisa. Inkasta oo Trump uu iska dhigayo in xanaaqiisa uu la xidhiidho sida Shiinaha u wajahayo fayraska corona, sababta dhabta ah ee jahwareerkeedu waxa ay u badan tahay in doollarku uu qarka u saaran yahay in uu lumiyo heerka ganacsiga adduunka iyo in yuan Shiinaha uu kasii baxayo.
Shiinaha ayaa soo saaray mid gudaha xuduudeeda u gaarka ah lacag cusub cyber habka lacag bixinta: e-RMB (Ren Min Bi, oo macnaheedu yahay 'lacagta dadku'). E-RMB-da waxaa hadda lagu tijaabiyaa dhowr magaalo oo Shiinaha ah, oo ay ku jiraan Shenzhen, Suzhou, Chengdu iyo Xiong'an. Magaalooyinkaas, e-RMB-da ayaa guud ahaan laga aqbalaa bixinta mushaaraadka, gaadiidka dadweynaha, cuntada, iyo iibsiyada dukaamada badankood. Nidaamka wuxuu ku xiran yahay WeChat iyo AliPay (kana yimid Alibaba). Lacagtan cusub ee loo yaqaan 'cryptocurrency' waxaa daboolay Bangiga Dhexe ee Shiinaha.
IMF waxay aasaastay mabda'a Xuquuqda Sawiradda Gaarka ah ee 2016, kaas oo "lacagaha hore" ay u sameysan yihiin nooc kaabis heerarkan cusub ee SDRrency cryptocurrency. Dhibaatada mashruucan IMF, si kastaba ha noqotee, waa in doollarku qaabkiisu yahay 41,73% wadaagga gudaha heerkan cusub ee cryptocurrency, halka yuan Shiine uu leeyahay kaliya 10.92% saamiga (Japanese yen 8.33%, British pound 8.09%, euro 30.93%). Marka iyada oo dhaqaalaha Shiinaha uu kusii jeedo inuu noqdo dhaqaalaha adduunka ugu xooga badan, saami qaybsiga IMF crypto heerka (SDR) waa mid aad u yar.
Marka runti waxaa jira dagaal dhaqaale oo socda; dagaal ku saleysan dejinta dejinta lacag cusub. Doolarka ayaa umuuqda inuu luminayo awooda qalalaasaha corona-na wuxuu siiyay cadaadiskii ugu dambeeyay, maadaama saxaafada lacagta aysan waligeed si xawli ah u socon Hadda taasi waa maahmaah, maxaa yeelay lacag dambe mar dambe lama daabaco. Kaliya tiro kombiyuutar ah ayaa la kordhiyay.
Yuan Shiine ayaa u muuqda inuu sii xoogaysanayo, halka doolarku uu ka lumayo qiimo aad iyo aad u badan.
Su’aasha hadda jirta ayaa ah in ay isweydaarsiga iyo bangiyada kala duwan doonayaan in ay uga guuraan heerka doolar una wareegaan heerka yuan ama in ay mar kale jiraan nooc heer caalami ah oo dahab ah. SDR sida heerka loo yaqaan 'crypto' uma muuqato inay tahay xulasho la isku halleyn karo midkoodna, sababtoo ah iyadoo hoos u dhaca qiimaha doollarka, in SDR sidoo kale hoos u dhici doonto (sababtoo ah saamiga doolarka oo ah boqolkiiba 41,73 ee SDR). Marka waa inaad ka takhalusaa saameynta lacagta fiat (lacagta aan la daabicin) oo saldhig u ah nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah.
Doolarku wuxuu umuuqdaa inuu gaadhay wakhtigiisii ​​ugu dambeeyay. Dhaqaalaha Mareykanka iyo Yurub ayaa bilaha soo socda ku dhici doona si adag saamaynta dhibaatada corona. Qiimaha suuqyada waawayn ayaa hadda kor u kacaya. Shirkado badan ayaa dhici doona sababta oo ah boqolaal balaayiin ayaa la daabacay, hoos u dhaca lacagta ayaa isla markiiba noqon doona mid la arki karo qof walba bilaha soo socda. Dadka wali xoogaa keyd ah waxay bilaabi doonaan inay walwalaan.
Xaqiiqdii, xaalad masiibo ah ayaa soo food saartay shirkado badan iyo kuwa keyd ah. Markay ahayd hoos u dhaca doolarka, dahabku wuxuu umuuqdaa inuu yahay meesha kaliya ee nabdoon, maxaa yeelay qaddarka dahabiga ah ee adduunka ayaa badanaa loo isticmaalaa inuu daboolo lacag inta lagu guda jiro dib u dejinta dhaqaalaha.
Si kastaba ha noqotee, bitcoin waxay sidoo kale u muuqataa inay si sii kordheysa u bixineyso meeshaas aaminka ah. Khatarta suurtagalka ah ee bangiyada soo dhacaya (maxaa yeelay shirkadaha baangiga ah iyo shakhsiyaadku ma sii bixin karaan amaahdooda ama dulsaarka amaahdaas), hanjabaadda damiinashada iyo damiinashada ayaa soo socota. Taas macnaheedu waa in midkoodna gobolka badbaadiyo bangiga (akhri: cashuur-bixiye) ama kaydinta loo isticmaalay in lagu keydiyo bangiga.
Sidaa darteed waxaan u badan nahay inaan arki doonno duulimaad adag oo lacag ah oo loo qaado bitcoin iyo dahab bilaha soo socda.
Waxaa la saadaalin karaa in duulimaadka ilaa bitcoin uu noqon doono kan ugu weyn, maxaa yeelay adigu si fudud uma iibsan kartid dahab adoo riixaya badhanka. Waad furtay boorsada waligeed bitcoin oo waxa bankigaaga maanta jiraya boorsadaada bitcoin berri. Duulimaadkaas illaa bitcoin, oo ay weheliso mabaadiida macdan qodista ee ay ku saleysan tahay, waxay u badan tahay inay siiso bitcoin booska caalamiga ah ee adag oo leh awooda ay ku yeelan karto booska doolar.
Yuan shiinaha waxaa laga yaabaa inuu daboolo bangiga dhexe ee shiinaha, laakiin sababta dahabiga ah ee wali ugu adeega sidii adduunkoo dhan gurmad ah ayaa waxyar ka qarsoon xaqiiqda ah inaad haysato dahabkeeda. Waa inaad taas ka soo saartaa dhulka qodista ee qodista miinooyinka dahabka ah, taas oo ah hawl aad u qaali ah oo xoog badan oo hawl yaraanta jirana. Mabda 'macdanta' Bitcoin 'waxay ku saleysan tahay isla fikradda, sida lagu sharaxay gudaha maqaalkani.
Baaxada ganacsiga bitcoin ganacsiga adduunka oo dhami hadda waa mid aad u badan oo dad badan oo fara badan iyo maalgashadayaal waaweyn ayaa xiiseynaya wayna galaan. Haddii aad ku darto xaqiiqdaas hoos u dhaca qiimo-dhaca sarifka ah iyo hoos u dhaca doolarka ee dollar, waxay umuuqataa in bitcoin badan ay noqon doonto hoyga bambo. Sidaa darteed waxay leedahay awood ay ku dejiso heerka cusub ee caalamiga ah iyo haddii doollarku hoos u dhaco, bitcoin waxay si fiican u qaadan kartaa booska doolarka heerka SDR cryptocurrency SDF.
Soodhawrka xiriiriya: edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Inkasta oo Trump uu waday dagaalkii xayiraadaha, Shiinaha ayaa sii waday mawqifka dollarka in ka badan iyo in ka badan
Taariikhdu waxay muujineysaa wareeg 90 sano ah dhamaan tilmaamayaashana waxay muujinayaan hoos u dhac qotodheer oo lama huraan ah
Venezuela waa tusaale u ah waxa naga sugaya iyo Europe iyo soo bandhigida cryptocurrency oo ah heer caalami ah
Sida Trump waxay saliidda dabka ka soo saartaa Waqooyiga Kuuriya, Yeruusaalem iyo Venezuela, awoodda ayaa u wareegta dhinaca bari
Tags: iyo, suunka, Seeraar, Bri, Shiinaha, Chinese, Fayruuska corona, dhibaatada, dollar, e-RMB, featured, lacag dhimis, Waxqabadka, wadada, JDS, Trump, Val, lacag
18 May 2020 ee 13: 22
Fikradayda, marka hore waxaan arki doonaa kala goyn dollar oo udhaxeysa dollar (caalami ah) iyo doolar maxali ah USA lafteeda. Dambe ayaa si weyn hoos ugu dhici doona, sida muuqaalka sida Venezuela. Kala-qaybsanaanta dollar waa qayb ka mid ah dib-u-dejinta maaliyadeed, maaddaama waddan walba uu ku maal galiyay wax badan oo madhnaan muwaadiniin ah (lacag gudaha ah, sida Iniase rupees) ee deynta Mareykanka ee nidaamka amaahda bangiga si loogu maalgeliyo ganacsiga caalamiga ah ee lagu dejiyay Doolarka. Wadamadu sidaa darteed waligood ma doonayaan inay arkaan sheegashadooda USA z = uumi baxa sicir barar awgeed, sidaa darteed fikradda kala qaybsanaanta. Intaa waxaa sii dheer, Shiinaha ayaa leh in kabadan hal tiriliyan deynta amniga Mareykanka. Haddii Shiinuhu doonayo inuu qaldamo waxay deyn karaan deynta suuqa oo haddii aysan jirin baahi, FED waa inay iibsadaan deyntaas oo kicineysa sicir barar gudaha Mareykanka. Hadalka adag ee Trump ee la xiriira dagaalka canshuuraha ayaa sidaa darteed aniga waxay ila tahay inuu yahay masraxa dadka shacabka ah si loo hirgaliyo dib u dajinta dhaqaalaha. Ha iloobin in dib-u-dejin dhaqaale ay la micno tahay in deyn badan laqarayo, maxaa yeelay dib-u-dejintu malaha wax micno ah oo ay ka mid tahay deynta xun ee nidaamka bangiga ee nidaamka cusub. Fadlan la soco, tani waxay khusaysaa oo keliya koox la xushay ee ma khusayso amaahda guryaha ama dadka leh deyn gaar loo leeyahay, kuwan si uun baa loogu sii wadayaa nidaamka cusub. Waxaan kaloo aaminsanahay inaan arki doonno qadarin weyn oo doollarka caalamiga ah ka hor inta uusan goobta ka dhammaan. Kororkan ayaa inta badan sabab u ah dalabka doolarka si loo dejiyo dhammaan qaybaha kala duwan. Waxaan u maleynayaa in tani ay sidoo kale noqon doonto waqtiga ay ciyaartoygu (bangiyada iyo bangiyada dhexe) ay iibinayaan deymaha Mareykanka.
18 May 2020 ee 13: 55
Hydrogen-ka waa kacaanka tamarta ee soo socota oo sababi doonta isbeddel muuqda. Marka laga soo tago saameynta tooska ah ee dhaqaalaha, ku dhawaad ​​dhammaan moodooyinka ku saleysan ilaha tamarta ee hore ayaa ka bixi kara daaqadda.
Dagaalkii wakiilka ahaa ee udhaxeeyey Shiinaha iyo America mar horeba wuu sii soconayaa oo kaliya wuu sii dari doonaa marka la eego geerida ku timid safiirkii Shiinaha ee Israel iyo eedeymaha biowarfare. Dhismaha ciidamada ee Badda Koonfurta Shiinaha (Diego Garcia) waa in sidoo kale la kormeero.
Hong Kong waxay ahayd hawlgal CIA Otpor oo caadi ah dabcan Shiinuhuna way ka jawaabi doonaan qaabkeeda marka waqtigu sax yahay.
19 May 2020 ee 12: 59
@salmon, waxay noqoneysaa arin waqti qaadaneysa.
18 May 2020 ee 14: 45
xitaa cunaqabatayn dheeraad ah, TSMC waa shirkad Taiwanese dharbaaxo xasaasi ah u ah Shiinaha.
Chipmaker-kii aduunka Qandaraaska ugu Weyn joojiyey Gawaarihiisii ​​Huawei Oo Xayiraadda New York ku soo rogay
18 May 2020 ee 18: 13
18 May 2020 ee 18: 14
18 May 2020 ee 20: 17
18 May 2020 ee 22: 05
Shin Bet Israel oo ah muuqaal 4 telefishan ah ayaa lagu sheegay Shin Bet, Israel 'Mossad', inuu ku dilay danjiraha dalabka Shiinaha kadib markii Du Wei isku dayay inuu cilladeeyo oo uu la wadaago macluumaadka ku saabsan shaybaarka dagaalka ee Shiinaha, ka dibna la wareejiyay.
19 May 2020 ee 07: 58
Fiiri fiidiyowyada kor ku xusan ee ZIO waxaa jira khatar badan oo loogu talagalay tuhmanayaasha caadiga ah.
21 May 2020 ee 16: 00
si fiican, tuhun caadi ah Bannon ayaa durbaba saadaalinaya isku dhaca tooska ah ee soo socda ee lala galo Shiinaha.
Bannon WarRoom - Muwaadiniinta Jamhuuriyadda Mareykanka
26 May 2020 ee 01: 24
« Dimuqraadiyadda toos uga toosi xirida iyo soo kabashada dhaqaalaha
Mar dambe ma geli kartid dukaanka hadaadan magacaaga iyo nambarkaaga addoonka ah siin dukaanka taasina waa bilow »
Wadarta booqashooyinka: 2.464.501